डा. सुरेन्द्र केसीलाई करिष्माको प्रश्न- म करिष्माको श्रीमान् भन्दा विनोदको इज्जत कसरी घट्यो? :: Setopati
डा. सुरेन्द्र केसीलाई करिष्माको प्रश्न- म करिष्माको श्रीमान् भन्दा विनोदको इज्जत कसरी घट्यो?
सेतोपाटी काठमाडौं, साउन १४
अभिनेत्री करिष्मा मानन्धरले राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र केसीलाई आफ्ना श्रीमान बिनोद मानन्धरले 'म करिष्मा मान्नधरको श्रीमान विनोद मानन्धर भन्दा कसरी मेरो श्रीमान विनोदको इज्जद घट्यो?' भनेर प्रश्न गरेकी छन्।
आफ्नो फेसबुकमा मंगलवार एक स्टाटस लेख्दै उनले सो प्रश्न गरेकी हुन्। उनले डा. केसी जस्तो विद्वान मानिसबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति आउनु आफ्नो अन्दाज भन्दा परको कुरा भएको उल्लेख गरेकी छन्।
'यदि करिश्मा के.सीले आफ्नो जात बद्लेर करिश्मा मानन्धर गर्न सक्छ भने बिनोदजीले म करिश्मा मानन्धरको श्रीमान भन्दा के बेइज्जत भयो ?', करिष्माको प्रश्न छ।
त्यसैगरी स्टाटसमा करिष्माले आफ्ना पति बिनोद डा. केसी भन्दा कुनै कुरामा कम नभएको उल्लेख गर्दै आफू राजा जस्तो भएर हिँड्न खोज्ने मानिसले आफ्नी श्रीमतीलाई रानी जस्तो व्यवहार गर्ने बताइन्।
'बिनोद मानन्धर तपाईंको तुलनामा कुनै कुरामा कम छैन । सबैभन्दा ठुलोकुरा उहाँमा मानवता छ र उहाँले तपाईंले जस्तो अरुको नचाहिने जजमेन्ट गरेर अरुको बारे गलत व्याख्या गर्नुहुन्न', करिष्माले लेखेकी छिन्।
करिष्माले लेखेको फेसबुक स्टाटसको संपादित अंशः
डा. सुरेन्द्र के.सी विश्लेषक , बोलिरहनु हुन्छ , तर कहिलेकाँही के बोल्नु हुन्छ के !!! त्यो उहाँ बोलाइको आधारमा उहाँको व्यक्तित्व आन्दाज गर्न मुस्किल जस्तो !!
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन १४, २०७६, ११:४२:००